Nhau - Ashine Akatora chikamu muKutanga Virtual Musangano neASCC
Ashine Akatora chikamu muKutanga Virtual Musangano neASCC
Semunhu mutsva nhengo yeASCC kubva kuChina, Jack Wang weAshine akapinda musangano weASCC wekutanga online wepagore muna Sep 21, 2020.
Musangano wepagore weASCC wakavhurwa zviri pamutemo nezuro. Semhedzisiro yedenda, musangano wegore weASCC wakatora chimiro cheZoom musangano wevhidhiyo. Kunyangwe vanhu vasingakwanise kutaura takatarisana chiso nechiso semazuva ese, asi kuburikidza nekamera zvakare yakaratidza iwo iwo manzwiro ekuti vane hanya pakati peumwe neumwe.
Muna Kurume 1, 2020, Ashine madhaimani ekugadzira akave nhengo yeASCC, zvinoreva kuti tinogona kuwana mikana yakawanda yekumisidzana nekudyidzana nenyanzvi dzeindasitiri kubva pasirese, kunyanya muUnited States, iyo zvakare inopa rutsigiro rwakasimba isu kuti tipe vatengi mhinduro dziri nani dzekuvaka.
Iyo hurukuro yakatora kwemaawa matatu, ichitarisa maitiro ekuratidza zviri nani kutungamira nhengo dzemitezo yekuvandudza tekinoroji yekuvaka, kumisikidza kuiswa kweindasitiri yehunyanzvi zviyero, uye kukurukura nezvehunyanzvi nyaya dzeindasitiri kunetsekana gore rapfuura.
Ashine senyika inozivikanwa yepasi yekukuya uye kupora nyanzvi, iyo nyanzvi yedhaimani maturusi ekupa, kana iwe uine chero matambudziko akafanana, tichaita zvatinogona kuti tikutsigire nemhinduro dzedu.
Concrete vachikuya Shoes, Diamond Kwayedza Bhutsu, PCD Kukuya Shangu, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri, Concrete makorari Mapedhi,